Mmepụta akụrụngwa ọgwụ, ngwa nnwale na ihe ndị na -eri ihe nwere ihe ndị siri ike maka ịdị ọcha na izi ezi izi ezi. A na -eji nfuli peristaltic na -ebute mmiri mmiri n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ahụike, ọkachasị n'ihi:
›Pipeline mmiri dị oke ọcha, dị mfe nhicha na sterilaiz
›Enwere ike iji pipeline otu ugboro ma ọ bụ ugboro ugboro
›Nfefe nwayọ na kwụsiri ike, nha ziri ezi
›Ọ nwere ike nyefee ihe nwere chaplet, gels, glycerin na adịghị ọcha na nsị ndị ọzọ
›Izi ezi zuru oke zuru oke
›Mgbidi dị n'ime pipeline ahụ dị larịị, enweghị njedebe nwụrụ anwụ, enweghị valvụ, na ihe fọdụrụ nke ukwuu
›Mgbanwe na -agbanwe agbanwe, obere oghere oghere na ọnụ ala
›Ike ịkwa osisi dị ala iji chekwa iguzosi ike n'ezi ihe
Pump nchapụta ọgwụ ịrịa ọrịa afọ nwere ike inye azịza zuru oke maka mkpa ndị a:
›Chemiluminescence akpaka/POCT na akụrụngwa IVD ndị ọzọ maka ịlele na mwepụ ihe mkpofu
›Nyocha protein, nyocha ọbara, nyocha stool, wdg.
›Mwepụ ịwa ahụ, hemodialysis, wdg.
›Nhicha eze, liposuction, lithotripsy, ihe nsure ọkụ nke eriri afọ, wdg.
›Njuputa zuru oke nke reagents na-achọpụta ọrịa, mmiri nkwakọ ngwaahịa, wdg.
Ọnọdụ ọrịa na -efe efe ugbu a ka siri ike, mgbochi na njikwa enweghị ike izuike, ọrụ ịlụ ọgụ maka "ntiwapụ" ahụ ka dịkwa ike. N'ime mgbochi na ịchịkwa ọrịa a, ọchịchọ maka ụfọdụ kemịkal arịala elu wee bụrụ ngwaahịa akụrụngwa dị ụkọ, dị ka kemịkal na -ekpocha mmiri na ihe nnwale nnwale. Iji hụ na ahịa dị n'ahịa ahụ, ndị nrụpụta ukwu na -agba ọsọ megide oge iji mepụta mmepụta. Ojiji akụrụngwa ọgwụ dị elu dị ka igwe na-ejuputa akpaka zuru oke yana ahịrị mmepụta ihe emeela ka nrụpụta nrụpụta nke ọtụtụ ndị nrụpụta belata. Fluid Lead na -eji nwayọ na -eme akụkụ ya iji kwado ọrụ mgbochi na njikwa ọrịa. Pump peristaltic Lead Fluid na nfuli sistemu peristaltic na -arụ ọrụ dị oke mkpa na ya. Mmiri ndu na -enyere aka ịnwale reagents na ọgwụ mgbochi n'okpuru ọrịa.
1. Ezigbo njuputa zuru oke, njehie ahụ erughị ± 0.2%.
2. Nhazi modular, dị mfe ịgbasa-enwere ike ịgbapụta ọtụtụ nfuli iji mepụta usoro ndochi ọtụtụ ọwa.
3. Ọkwọ ụgbọ ala servo nkenke, nnukwu torque, enweghị mmezi structure Ọdịdị tube Rotary pressure, arụmọrụ dị elu.
4. The mgbapụta tube bụ ala na ọnwụ, na -aga n'ihu ọrụ ndụ ruo 1000 awa, 12 awa attenuation ọnụego ＜ 1%.
5. Ọrụ mịzụ azụ, nzere efu, mmechi ozugbo.
6. pipeline dị ọcha, dị mfe ịkwasa, dị mfe ịsacha na sterilaiz, kwado CIP na SIP.
7. Ọ dịghị mfe imechi pipeline, ọ nwekwara ike ịnagide ihe ndị dị mfe ịkpali ma nwee viscosity dị ka beads magnetik, glycerin, wdg.
8. Enwere ike iji aka ya rụọ ọrụ ma ọ bụ jiri ya na eriri mmepụta akpaka.
Sistemu Mmeju Pistaltic Pump
1. Nye ọrụ n'otu oge nke ọtụtụ ọwa, ma gbasaa ọnụọgụ ọwa site na ịwụnye ọtụtụ sistemụ.
2. Ndozi nnwere onwe nke olu mmiri na -ejuputa maka ọwa ọ bụla iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ ijupụta (njehie ≤ ± 0.5%).
3. Ọ nwere ike nabata akara mmalite nke igwe na -ejuputa na akara nkwụsị nkwụsị maka enweghị karama iji ghọta ọrụ akpaka n'ịntanetị; enwere ike ijikwa otu ọrụ ndochi site na ntụgharị ụkwụ iji ghọta ọrụ kwụụrụ onwe ya.
4. Mmiri mmiri na -ejikọ naanị na sooks ọ bụghị ahụ mgbapụta, enweghị mkpọchi valvụ, a na -ezere mmetọ obe.
5. Kwesịrị ekwesị maka mmiri mmiri abrasive, mmiri viscous, emulsions ma ọ bụ mmiri nwere ụfụfụ, mmiri nwere nnukwu gas, mmiri nwere ihe ndị a kwụsịrị.
Na ndochi reagents ule, a na -enwekarị ihe ndị a:
01 Izute ihe achọrọ maka imeju olu na amụ nwa; nkenke zuru oke zuru oke yana arụmọrụ dị elu.
02 Sistemu ndochi nwere nkwụsi ike dị mma, ọ nweghị ihe na -amị amị ma ọ bụ na -akwụgide.
03 Enwere ike jupụta na mmiri ihe na -emebi emebi ma ọ bụ mmiri na -emebi emebi nwere ihe ndị a kwụsịrị.
04 Mgbe ị na -ejuputa mmiri mmiri na ọrụ ihe ọmụmụ, enweghị ike ibibi ọrụ ihe ọmụmụ ahụ.
05 Mgbapụta dị mfe iji rụọ ọrụ ma dịkwa mfe ilekọta.
Oke ọnụego ọnụego nke ngwaahịa mgbapụta Lead Fluid peristaltic mgbapụta a tụrụ aro ya sara mbara ma na -agbanwe, yana oke mmiri na -ejuputa izizi na nkwụsi ike; ya na obere ịkwa osisi, enwere ike iji ya bufee ma jupụta ihe ọ bioụ bioụ na -arụ ọrụ biologically na -enweghị inactivation; Liquid na-ejuputa na-ejikọ naanị na sooks, na-ewepụ ihe ize ndụ nke mmetọ obe; site na ịhọrọ eriri na-eguzogide corrosion, enwere ike iji ya jupụta mmiri dị iche iche na-emebi emebi, na site na ịhọrọ eriri na-eguzogide ọgwụ, enwere ike iji ya jupụta mmiri nwere ihe siri ike; Site na njirimara dị iche iche nke ihe ọ liụ liụ mmiri, mkpa olu ndochi dị iche iche yana mkpa ọrụ dị iche iche, ngwaahịa mgbapụta otu peristaltic ma ọ bụ sistemụ ndozi mgbapụta nwere ike ịhazi OEM iji nye azịza zuru oke; mgbapụta peristaltic anaghị achọ valvụ na akàrà mgbe ị na -ejuputa mmiri mmiri, yana enweghị mgbapụta mgbapụta kpatara nkụ na -agba ọsọ, ọrụ dị mfe, mmezi dị mfe, na ịchekwa ọnụ ahịa.
Mmiri ndu anọwo na-elekwasị anya na imewe, mmepe, imepụta na ịre ahịa nke nfuli peristaltic, ọ na-agbakwa mbọ inye ndị ọrụ ngwaahịa mgbapụta peristaltic dị elu na ọrụ teknụzụ zuru oke. Na mgbakwunye na ịnweta ahịrị ngwaahịa mgbapụta peristaltic zuru oke, Mmiri Ọkpụkpụ nwekwara ike ịnye ọrụ mgbapụta OEM ahaziri iche dịka mkpa onye ọrụ si dị. Ahụmịhe mmepe ngwaahịa zuru oke na nke tozuru oke nwere ike inye gị ngwa ngwa na ntuziaka ngwa ngwa, wee nye ndị ọrụ ezigbo mma, nkenke dị oke ọnụ, yana usoro mgbapụta mgbapụta mgbapụta dị ọnụ ala.